Guurkii hore siddee buu ahaa? | Hangool News
Guurkii hore siddee buu ahaa?
Soomaalida marka loo eego Guurku, wuxuu ka mid yahay wax yaabaha ay aadkau qadariyaan, waxaana labada reer eeay ka soo jeedaan labada qof ee nolasha cusub
Soomaalida marka loo eego Guurku, wuxuu ka mid yahay wax yaabaha ay aadkau qadariyaan, waxaana labada reer eeay ka soo jeedaan labada qof ee nolasha cusub abuuraya, ay sameen jireen xidhiidh soo jireen ah iyo is xushmeen mid kasta mid kale.
Guurkii horre waa uu cuslaa waxaana qofka ragga ah ee doonaya in uu guursado gabadh lagu xidhi jiray shuruudo adag oo ah xagga dhaqaalaha ,aqoonta iyo kartinimadiisa.
Waxaa berrigii horre wiilka doonaya in uu guursado gabadh laga qaadi jirayFaras Cad, dhowr neef ooGeelah iyoQori, iyadoo ay u sii raacsanaayeen shuruudo adag.
Guurka maanta wuxuu noqday mid ku soo koobmay “Waa ku arkay waa ku caashaqay” waayo waxaad arkeysaa gabadhama wiil isku bartay saacadwax ka yar oo aqoon badan aan isku lahayn oo leh toddobaadka dambe ayaan is guursan rabnaa.
Labadan qof ee isku cusub, wax badan iskama yaqaanaan dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan, waxaana taasi ay keentaa in uu guurkaasi noqdo mid fashilma.
Furiinku Soomaalida dhexdeeda aad ayuu ceeb u ahaa, gabadha la soo furo waa la takoori jiray, ninka naagaha furana waxaa la isku sheegi jiray oo habluhu waa ay ka carari jireen, maadama uu yahay “Xille gubay”
Maanta waxaa meelaha ay degto Soomaalida ku arkeysaa gabar 18-sanno ka yar oo ay soo fureen in ka badan labanin isla markaana gacanta jiidaysa dhowr carruur oo kala aabo ah, oo ay ka muuqatodaryeel la,aan .
Diyaariye: Musatfe Daahir Cali
Mobile: 063-4330090/063-4394262 Or 065-9114647/065-4330090
Shifa University Burao Campus Two
Maxaa kaaga baxay Warbixintan,? Ra’yigaaga ka soo dhiibo MudaneMarwo.